မှားတတ်သောစကားလုံးများ (Commonly Confused Words by Guy Perring) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on February 21, 2011 at 13:16 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/commonly-confused-words-by မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
Permalink Reply by HninSiCho on February 21, 2011 at 20:04
I think the number3answers are wrong. Or am I wrong? :D
Permalink Reply by susie aye on February 23, 2011 at 11:02
I think the same way, it should be a) sensitive b) sensible. Could be typo error. Hope admin can correct sooner.
Permalink Reply by Ummay Ayman on February 23, 2011 at 11:19
Sorry for the inconvenience. We have corrected the answers.
Permalink Reply by susie aye on March 8, 2011 at 21:33
Dear TNT, sorry for my late reply.
a) correct answer is 'sensitive' because......It isawarning about critizinga(sensitive) man. Author suggests that man can get angry easily if someone critized him.
b) correct answer is 'sensible'. 'Sensible' (=make sense) hasapositive meaning. Author suggests ' it is good to take note of passport number' and you should do it.
Did I make it clear enough? If you are still in doubt, please try to change the answer and translate again. It will soundabit odd, especially for sentence (b).
Permalink Reply by susie aye on March 9, 2011 at 13:25
အထက်က ပြောပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျမအမြင်ကတော့ အဖြေနှစ်မျိူးလုံးဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီး စာပိုဒ်တခုလုံးအနေနဲ့ တခြားဝါကျတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတွဲဖတ်မှ clear-cut answer ရမှာပါ။ ခုမေးခွန်းပေးထားတာက သူ့တကြောင်းတည်း ဆိုတော့ (ပိုကောင်းတဲ့) အဖြေကိုဘဲ ရွေးရမှာပါ။
ကျမကတော့ အခုထိ a)sensitive - b)sensibleကို ရွေးဆဲပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့.........
၁) အပေါ်က article မှာ စာကြောင်းကို မြန်မာလို ပြန်ထားတဲ့ အဓိပ္မါယ်ကြောင့်ပါ။ ဒါကလည်း မြန်မာပြန်သူရဲ့ bias ကြောင့်လို့ ပြန်ချေပမယ်ဆိုရင် ဒီ (၁) အချက်ကို ပယ်လိုက်ပါ။
၂) ကို TNT ပြောသလို Be careful when you comment on his fashion, he is sensible about it.
ဆိုပြီး စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ( သူ့ဖက်ရှင်ကို သွားမဝေဖန်နဲ့ သူက ဖက်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တော်တော် သိတယ် ) ကျမကတော့ ဒီစာကြောင်းအပေါ်မှာ သံသယ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်တော်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် အဝေဖန်ခံနိုင်မှ တိုးတက်တာ မဟုတ်လား။ (သူ သိပ်တော်တယ်၊ သွားမဝေဖန်နဲ့) လို့ ပြောမလား ( သူ သိတ်စိတ်ဆတ်တယ်၊ သွားမဝေဖန်နဲ့) လို့ ပြောမလား။
၃) နောက်တခု ( It is sensitive to keep note of your passport number.) ( မင်းရဲ့ နိုင်ငံတကာ ခရီးသွား လက်မှတ်နံပါတ်ကို ရေးချဖို့ဆိုတာ သိပ်အန္တရာယ်များတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ် ) ..... keep note of ရဲ့ အဓိပ္မါယ်က note down/ takeanote of တို့လို လူမြင်သူမြင် လူကြားသူကြားချရေးတယ်လို့ ကျမ မယူဆပါ။ ကိုယ့်ဖာသာ လုံလုံခြုံခြုံ ရေးမှတ်ထားမယ်၊သို့မဟုတ် mental note အနေနဲ့ စိတ်ထဲမှာ အလွတ်ကျက် ထားချင်ထားမယ်။ အရေးကြီးတာက document ကိုယ်နဲ့ တပါတည်း မပါတဲ့အခါမှာ ရေးသွင်းရမဲ့ နံပါတ် မေ့မသွားဖို့ပါ။ ဒါကြောင့်မို့ (It is sensible to keep note of your passport number. နိုင်ငံကူး လက်မှတ်နံပါတ်ကို မှတ်ထားရင် ကောင်းလိမ့်မယ်။) ကို ရွေးချယ်မိတာပါ။
စကားနိုင်လုတာ မဟုတ်ပါ။ ကျမလည်း မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်။ ကို TNT နဲ့ ဆွေးနွေးရတဲ့အတွက် ပညာလည်းရပါတယ်။ Native speaker တယောက်ယောက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရင် ပိုကောင်းလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
Permalink Reply by susie aye on March 9, 2011 at 16:48
နည်းနည်းပြန်ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုရင် (ကျိုးကြောင်းမခိုင်လုံဘဲနဲ့) ဆိုတဲ့ စကားလုံးက မူရင်းစာကြောင်းမှာ မပါလို့ တမင် ချန်ထားခဲ့တာပါ။ ကျမကတော့ တယောက်ယောက် comment လုပ်တယ်ဆိုကတည်းက သူ့အတွက် ကျိူးကြောင်းခိုင်လုံလို့ လုပ်တယ်လို့ ယူဆထားတာပါ။ အရမ်းကာရော ဝေဖန်တာမျိူးကိုတော့ making silly/cheap comment လို့ တကူးတက သုံးသင့်သလားလို့ ထင်တာပါ။
keep note of ဆိုတာကို ( ကိုယ့်ဖာသာ ရေးချတယ်) လို့ ကိုသက်နိုင်ထွန်း ယူဆသလို ဘာသာပြန်ရမလားဆိုတာ ကျမ အမှန်တကယ် မသိပါ။ လက်လှမ်းမီသမျှ dictionary ထဲမှာ keep note of ဆိုတာကို ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ လောလောဆယ်တော့ ( စိတ်နဲ့ဖြစ်စေ စာနဲ့ဖြစ်စေ အမှတ်အသားပြုသည် ) ဆိုတဲ့ အဓိပ္မါယ်မျိူးနဲ့ sensible to keep note of passport number သုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို တွေးဖြစ်သွားတာကလည်း ကိုယ့် ပတ်စ်ပို့နံပါတ်ကို ကိုယ် မမှတ်မိတတ်တဲ့လူမျိူးထဲမှာ ကျမ ပါနေလို့ပါ။
ဒီရက်အတွင်း ခရီးထွက်ရမှာမို့ တခြားသူများနဲ့ မေးမြန်းကြည့်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကိုသက်နိုင်ထွန်းရဲ့ မေးမြန်းတွေ့ရှိချက်နဲ့ နောက်ဆုံးအဖြေကိုဘဲ စောင့်ဖတ်ပါတော့မယ်...။
member အသစ်မို့ ဒီလို discussion မျိူးမှာ ဗမာလိုတွေ တအားရေးလို့ သင့်မှသင့်ရဲ့လားမသိပါဘူး။ ထောက်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။
Thanks for discussion, susie
Permalink Reply by Peaceangel on February 23, 2011 at 17:14
Permalink Reply by Aung on February 23, 2011 at 19:34
Permalink Reply by Ye Hein Naing on February 24, 2011 at 14:05
The topic is not used to. It's very useful for me.
Permalink Reply by 2vkwxlcjq9dt5 on February 24, 2011 at 19:02
Permalink Reply by swenutunn on February 25, 2011 at 14:09
Permalink Reply by swanpi on February 26, 2011 at 19:51